Poland iyo Netherlands waxay ku biirayaan xisbiga Apple Pay ka hor dhamaadka sanadka | Waxaan ka socdaa mac
Poland iyo Netherlands waxay ku biirayaan xisbiga Apple Pay ka hor dhamaadka sanadka
Markii ay u muuqatay in warkii la xiriiray Apple Pay uu dhamaaday, waxaan usbuuca oo dhan ka hadleynay tikniyoolajiyadda lacag la'aanta ah ee laga helo Apple, farsamada aan soo daabacnay toddobaadkan ayaa dhowaan imaan doonta Hindiya. Laakiin marka hore wuxuu ku sameyn doonaa Norway, oo ah waddan lacag bixinta moobaylku waxay ku dhowdahay waajibaadka muwaadiniinteeda. Laakiin Noorway ma noqon doonto wadanka kaliya ee Yurub ee arki doona sida dadka isticmaala iphone ay u bilaabi karaan adeegsiga aaladooda qaab lacag bixin ah, maadaama sida ay sheegayaan wararka cusub ee labada dal ee Poland iyo Netherlands ay sidoo kale awoodi doonaan inay ku raaxeystaan ​​tikniyoolajiyadan lacag bixinta ka hor dhamaadka sanadka.
Sida AppleInsider baratay, Bangiga guriga ee Polish-ka PKO Bank Polksi wuxuu durbaba tijaabinayaa Apple Pay ayna bilaabi karaan inay taageeraan ka hor dhamaadka sanadka. Sawirka kore, waxaan ka arki karnaa kaarka bangigan kujira arjiga Wallet-ka oo diyaar u ah in loo isticmaalo macaamil ganacsi.
Haddii bangiga la xushay ee Poland uu ahaa PKO Bank Polksi, Nederland waxay noqon doontaa ING, Bangi si lama filaan ah sidoo kale looga heli karo Spain, laakiin in xilligan uusan ka jawaabin codsiyada isticmaalaha ee ku saabsan imaatinka suurtagalka ah ee adeegiisa Spain. ING ka sokow, Nederland adeeggan wuxuu sidoo kale la jaan qaadayaa bangiga labaad ee ugu weyn dalka Bunq, halka bangiga saddexaad ee ugu weyn dalka, Rabobank, uu leeyahay qaadashadiisa weli lama qorsheynin.
Taariikhda la qorsheeyey in lagu soo saaro shirkadda Apple Pay ee Nederland waa soo socota november 2, Isla maalintaas Apple ay soo bandhigi doonto natiijooyinkeeda dhaqaale rubucii maaliyadeed ee ugu dambeeyay ee 2017 oo ay xirto isla sanadka maaliyadeed. Waqtigaan la joogo Denmark iyo Finland labaduba wali waxay kujiraan dekad qallalan oo sugaya goorta bangiyada dalku ay qaataan oo ay bixiyaan Apple Pay. Luca Maestri, CFO-ga Apple, wuxuu ku dhawaaqay in imaatinka Apple Pay ee dalalkan ay ku dhowdahay shirkii natiijo maaliyadeed ee shirkaddu u dambeysay, saddex bilood ka hor.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Poland iyo Netherlands waxay ku biirayaan xisbiga Apple Pay ka hor dhamaadka sanadka
Sawirka meeleynta Alberto Guerrero dijo
Waxaan jeclahay in waddamadu sii wadaan inay ku biiraan habkan lacag bixinta, waa mid aad u habboon oo dhakhso leh.
Ku jawaab Alberto Guerrero
Laga soo bilaabo abuurayaasha Fantastical, wuxuu ka yimaadaa Cardshop maaraynta xiriirka
Sidaas waxaad ka samayn kartaa nuqul guud oo ah sawirada iyo fiidiyowyada maktabadda sawirada ee 'iCloud Photo Library' ee 'Mac'